Ngaba sele unayo iMacOS ePhakamileyo yeSierra efakwe kwiMac yakho? [Uphando] | Ndisuka mac
Sele ziintsuku ezintathu kwaye eyokuqala Inguqulelo ye-beta 1 yenkqubo entsha ye-MacOS High Sierra 10.13.1. Kwezi ntsuku zimbalwa kukho izigidi zabasebenzisi abafake uhlobo olutsha lwenkqubo yokusebenza ye-MacOS High Sierra kwii-Mac zabo kwaye kucacile ukuba kulungile.
Sifuna ukwenza uphando oluncinci kunye nawe kwaye sazi kuqala isandla malunga nenani labafundi abavela kuMac esele inefayile entsha efakiweyo, ke lo mbuzo ucacile: Ngaba sele unayo iMacOS ePhakamileyo yeSierra efakwe kwiMac yakho?
Uvavanyo lokugqibela esilwenzileyo belugxile ngokucacileyo i-iPhone X kunye nokuthengwa kwayo, ngaphandle kwento yokuba ngexesha lokupapasha olo phononongo imodeli entsha ye-iPhone ibingaziswanga ngokusemthethweni. Kule meko, sinenguqulelo entsha yeMacOS ePhakamileyo yeSierra ekhoyo, ke siyacinga ukuba uninzi lwenu sele selukule nguqulo. Umbuzo ucacile kwaye iimpendulo zingaphezulu, ukuze uthathe inxaxheba.
Ngaba sele unayo iMacOS ePhakamileyo yeSierra efakwe kwiMac yakho?
Asithandabuzi ukuba uninzi lwakho lukwinguqulelo entsha yenkqubo yokusebenza, kodwa kukho abasebenzisi abaliqela abasetyenziswayo (abalungileyo okanye abangalunganga) ngokungabi ngabokuqala ukuvuselela, "abamkeli bokuqala" namhlanje bangaphantsi kunangaphambili . Nini I-Apple isungula uhlobo olutsha lwe-iOS, iMacOS okanye iwotsOS, abasebenzisi abasangxami ukuhlaziya izixhobo zabo kwaye oku akwenzekanga kwiminyaka embalwa edlulileyo ukusukela kwangaxeshanye kusungulwa wonke umntu ebesungula inguqulelo entsha. Ngamafutshane, asazi ukuba kulungile okanye kubi, into ecacileyo kukuba kufuneka sisoloko sifaka iinguqulelo zamva nje ezikhoyo kwi-Mac yethu kwaye ngale ndlela siphephe iingxaki zokhuseleko okanye ukungahambelani nezicelo, njl.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Ezahlukeneyo » Ngaba sele unayo iMacOS ePhakamileyo yeSierra efakwe kwiMac yakho? [Uvoto]
ULeonardo Astete sitsho
Ndikhetha ukulinda iiveki ezi-1 okanye ezi-2. Bahlala beza nengxaki ekuqaleni kwe-xD
Phendula kuLeonardo Astete
UCarlos Raffernau Alarcon sitsho
Sele ndilungile nge-iOS 11
Phendula uCarlos Raffernau Alarcon
Ukuba ndinayo, kulungile. Kwaye ndiyaphinda xa kunokwenzeka: ukuba umntu usebenzisa i-wacom AKANAKUYIPHAKAMISA ukuya kwi-sierra ephezulu kude kube sekupheleni kuka-Okthobha, khangela ulwazi, kubalulekile.
Luis leonardo sitsho
Ngelishwa faka i-sierra ephezulu kufakelo olucocekileyo.
kwaye bendizama ukusombulula oko yaphuma
Ithatha malunga ne-1 min ukulayisha inkqubo kunye nemizuzwana engama-20 ukuyibona.
Iimpawu ze-Desktop zivelisiwe ngaphandle kokuba ndibone ii icon ngaphandle kokuba kwi desktop
Ithatha malunga nemizuzwana eli-10 ukuba indixelele ukuba igama eligqithisiweyo alilunganga.
Ikhusi elipinki livela xa ndivula ikhusi.
kwaye ayenzeki nge-10.12 okanye ngo-10.11
Phendula luis leonardo